vendredi, 20 mars 2020 08:13
Faritra Atsinanana: Mandray ny asany ny Governora Rafidison Richard Théodore
Tontosa ny alakamisy 19 marsa 2020 ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny Governoram-paritra Atsinanana teto Toamasina.
mardi, 17 mars 2020 16:36
Toamasina: Notsenaina manetriketrika ny Governora RAFIDISON Richard Théodore
Noraisin’i Toamasina ny Governoran’ny Faritra Atsinanana.Nanomboka teny amin'ny Seranam-piaramanidina Ambalamanasy, namakivaky ny tanàna ka hatrany amin'ny trano malalaky ny Lapan’ny Faritany.
vendredi, 06 mars 2020 18:23
CENI : Mangataka ny fanesorana ny filoha lefitra eo anivon'ny HCC ny filohany
Nandefa taratasy fangatahana ny fanesorana ny filoha lefitry ny CENI, Rakotonarivo Manantsoa Thierry, eo anivon'ny HCC ny filohany noho ny fahadisoana be vava sy fivadihana tamin'ny fianianana natao.
jeudi, 05 mars 2020 13:31
Rafidison Richard Théodore: Voatendry ho Governoran’ny Faritra Atsinanana
Nahazo Governora ny Faritra Atsinanana. Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly alarobia 4 martsa 2020 ny didim-panjakana fanendrena azy. Izy no Governora faha-14 voatendry hatramin’ny septambra 2019 no mankaty.